आज पनि बढ्यो सुनको मुल्य, हेर्नुहोस तोलाको कतिमा कारॅवार भयो त ? – Ap Nepal
बुधबार प्रति तोला ९२ हजार रुपैयाँले कारोबार भएको सुनको मू’ल्यमा बिहिबार थप २०० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार छापा वाला सुन प्रति तोला ९२ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ भने, तेजाबी सुनको मू’ल्य ९१ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यता चाँदीको मूल्यमा पनि बुधबारको मूल्य थप २५ रुपैयाँले हुँदै बिहिबार प्रति तोला एक हजार ३३५ रुपैंयामा कारोबार भएको छ।
भारतमा बुधबार २४ घन्टामा तीन लाख १५ हजार चार सय ७८ नयाँ सं’क्रमित भेटिएका छन् । को’रोना भाइरसबाट एकै दिन यति धेरै सं’क्रमण पुष्टि भएको यो विश्वकै पहिलो रेकर्ड हो । यसअघि सबैभन्दा बढी गत जनवरी ८ मा अमेरिकामा तीन लाख सात हजार मानिस संक्रमित भएका थिए । २४ घन्टामै को’रोनाकै कारण भारतमा दुई हजार एक सय एकजनाको मृ’त्यु भएको छ । लगातार दुई दिन दुई हजारभन्दा बढीले को’रोनाका कारण ज्यान गु’माए ।
भारतमा अहिले २२ लाख ८४ हजार सं’क्रमितको उपचार भइरहेको छ । बुधबार एक लाख ७९ हजार सं’क्रमित निको भएका छन् । मंगलबार दुई लाख ९४ हजार नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए भने दुई हजार २१ जनाको मृ’त्यु भएको थियो । भारतमा सं’क्रमणबाट अहिलेसम्म एक लाख ८४ हजार सात सय ७२ को मृ’त्यु भएको छ । बुधबार नै महाराष्ट्रको एक सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन ट्यांंक चुहिँदा २४ को’रोना सं’क्रमितको मृ’त्यु भएको थियो । अक्सिजन ट्यांक मर्मत गर्दा अक्सिजनको आपूर्ति ३० मिनेट रोकिँदा उपचाररत सं’क्रमितको मृ’त्यु भएको थियो ।
Prevआज केही बेरमा नेपाली आकाशबाट उल्का वर्षा भएको देखिने
Nextअन्तत:नायक किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदालको मिलन ! दुवैले गरे यस्तो मिडियामै अठोट (भिडियो सहित)
आज बढ्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति पुग्यो… त?
नेपाल पैसा पठाउदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस आज यस्तो छ विदेशी मुद्राको सटही दर।